Mma karịa lighter>
Mụọ ọrụ na nkeji 10>
Ọdịdị dị elu na izi ezi>
Siri ike na nchebe>
Enwere ike ijikọ ya na ọtụtụ ụdị drones>
Gịnị kpatara Rainpoo
Onye na-ese igwefoto kasịnụ China
Tọrọ ntọala na 2015, rainpoo na-elekwasị anya na foto oblique maka afọ 5+. companylọ ọrụ ahụ akwakọbala ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke teknụzụ ndị dị n'ọhịa nke ngwa anya, igodo na-enweghị atụ, foto foto, na nhazi data gbasara ohere. Ihe karịrị ngalaba 500 rere kwa afọ, azụmahịa 2500 + gburugburu ụwa tụkwasịrị obi na Rainpoo.
Onye mbu weputara igwefoto obula elekere ise n’ime 1000g (D2) ， mgbe ahu DG3 (650g), mgbe ahu DG3mini (350g). Rainpoo ka na-achọ ịme ngwaahịa ka ọ dị mfe, pere mpe, na-agbanwe ọtụtụ ihe, ma dịkwa mfe iji.
Ihe anyị kwesịrị ịkarị bụ mgbe anyị onwe anyị, anyị agaghị ahapụ.
Otu igwefoto, anya ise. Nchịkọta a na - enye gị ohere ịnakọta foto site n'echiche ise n'otu ụgbọ elu. Rainpoo ewepụtala ọtụtụ sọftụwia na ngwaike na - akwado nke ọma, nke na - enweghị ike ịchekwa oge ọrụ ụgbọ elu UAV, kamakwa ịchekwa oge nke usoro nhazi nke ngwanrọ 3D. .
Hụ “Ngwa” ka ịchọta otu esi eji ngwa iji chekwaa oge gị>
Dị modular na-eme ka ọ dịrị onye ọ bụla mfe ịmụta otu esi etinye ma jiri igwefoto. Intelligent software-enye gị ohere download foto na otu-click.
Onwe ya mepụtara ngwa anya lens.Built-na Double Gauβ na ụma low dispersion Aspherical lens, nke nwere ike ịkwụ ụgwọ aberration, dịkwuo nkọ, belata mgbasa ahụ ma na-ejikwa ọnụ ntugharị na-erughị 0.4%.
Mụtakwuo maka ogo ihe oyiyi na izi ezi>
Kedu ihe kpatara ịmekọrịta lenses ise ji dị oke mkpa? Anyị niile maara na n'oge ụgbọ elu na-efe efe, a ga-enye mgbaàmà ise nke igwefoto obique ihe mgbaàmà na-akpali akpali. Na tiori, anya anya ise kwesiri ka ekpughere ya na synchronously, emesia a ga - edekọ data POS n’otu oge.Ma mgbe nkwenye zuru oke, anyi ruru nkwubi okwu: ihe omuma ihe omuma nke ihe ngosi ahu, ihe kariri ihe data nke lens nwere ike idozi, mpikota onu ma chekwaa, ma oge ka ukwuu iji mezue ndekọ ahụ. Ọ bụrụ na etiti oge n’etiti ihe mgbapụta ahụ dị mkpụmkpụ karịa oge achọrọ maka oghere iji mezue ndekọ ahụ, igwefoto agaghị enwe ike ịme ihe ngosi ahụ, nke ga - eme ka “foto efu” .BTW ， mmekọrịta ahụ dịkwa oke mkpa maka akara ngosi PPK.
Mụtakwuo maka Ngakọrịta mmekọrịta>
A na-eji shei mee nke magnesium-aluminom alloy iji chebe anya m dị mkpa, yana maka igwefoto n’onwe ya dị obere ma pere mpe, ọ ga-esiri ya ike iburu ibu ọ bụla ọzọ na drone ụgbọelu. Ma n'ihi na ọ bụ modular imewe (igwefoto ahụ, nnyefe unit na akara unit na-iche), ọ dị mfe iji dochie ma ọ bụ ịnọgide na-enwe.
Ma ọ bụ multi-rotor UAV, a ofu nku drone, ma ọ bụ a VTOL, anyị igwefoto nwere ike ike na ha na dabara dị ka dị iche iche ngwa.